Madaxweynaha dowlada Puntland oo dhagax-dhigay xarun cusub oo ay yeelan doonto wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha dowlada Puntland oo dhagax-dhigay xarun cusub oo ay yeelan doonto wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare
September 25, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha Puntland oo dhagax-dhigaya xarunta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland. Sawirka: Xafiiska warfaafinta madaxtooyada Puntland.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Axad ah dhagax-dhigay dhisme cusub oo ay yeelan doonto wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland.
Munaasabada dhagax-dhiga ayaa waxaa madaxweynaha ku waheliyay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Abshir Yuusuf Ciise, wasiir ku xigeenkiisa Maxamed Cali Faarax iyo saraakiil kale oo katirsan dowlada.
Madaxweyne Cabdiweli oo munaasabada dhagax-dhiga hadal ka jeediyay ayaa ku amaanay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dadaalka ay ugu jirto dar-dar gelinta adeegyada ay kor ugu qaadayso aqoonta bulshada Puntland.
Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa kamid ah wasaaradaha ugu waa-weyn Puntland.
August 18, 2016 Masuuliyiinta Nugaal oo ka hadlay howlgalo nabadgalyo oo ka socda magaalada Garoowe